www.mgluaye.com လုပ်ချင်လို့ Domain တော့ ၀ယ်ထားပြီးပါပြီ။ Setup လုပ်ဖို့ပဲ ကျန်နေတော့တာပါ။ လောလောဆယ် Domain Setup မလုပ်ခင်မှာ www.mgluaye.com မှာ တင်ဖို့ ဗီဒီယိုတွေ Edit လုပ်တဲ့ နည်းတွေ လိုက်မွှေနေပါတယ်။ အဲဒီထဲက ရထားတဲ့ တစ်ခုနဲ့ လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ Video File တချို့ကို လက်ဆော့ပြီး တင်စမ်းကြည့်ထားတာပါ။
သီချင်းတွေကတော့ YouTube မှာလည်း သူများတွေ တင်ထားပြီးသား သီချင်းတွေပါ။ လောလောဆယ်တော့ Video Editing လုပ်ဖို့ Software ကောင်းကောင်း မရသေးဘူးဗျ။ သိတာလေးတွေ ရှိရင် Share ခဲ့ကြပါဦး။
အိုးလေး လှုပ်ပါဟေ့ - စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
မိုက်ခဲ - ကြက်ဖ
Filed Under : Entertainment, VIDEO
premier pro နဲ့လုပ်ကြည့်ပါလား brother. ကျတော် ကတော့ သိပ်မသုံးတက်ပါ။ ဖူးဘားရှင်း ကျတော့ဆီမှာတော့ ဒေါင်းထားတာရှိပါတယ်။ လိုချင်ရင် ပြောပါ။ ဒါမှမဟုတ် 4shared.com မှာ ရှာကြည့်လဲရပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေ ခင်ဗျား
weblog that’s each educative and entertaining, and let me inform you, you have hit the nail on the head.
Here is my blog: disciplesconnections.com
my webpage - http://pluft.google-scraps.us/
Also visit my website - http://Www.Bjoyful.us/blogs/entry/Spanish-Property-Market-Still-Going-Strong-2013-05-17-0
Feel free to surf to my web site; piemitalia.altervista.org
Review my blog post ... www.haveyourwebsite.com
Stop by my weblog http://www.autismoutofthebox.com/index.php?option=com_blog&view=comments&pid=177472&Itemid=0
My homepage; http://www.voiconnekt.com
Also visit my web page ... http://digitalxportal.net/
My web site: http://www.szakibazis.com/
useful info here within the put up, we want work out extra techniques on this regard, thank you for
Feel free to visit my page http://www.thewhir.asia/
My blog - http://viralsocialpop.com/oxwall/link/75005